03 Jiona 2020 - FJKM Québec - Canada
03 Jiona 2020
2 juin 2020 by FJKM-QUEBEC
Ny asa soa kristiana
OHABOLANA 3 : 27-30
3:27 Aza mamihina ny soa amin’izay tokony homena azy, raha azon’ny tananao atao ihany;
3:28 aza manao amin’ny namanao hoe: Mandehana, ka avia indray, fa rahampitso no homeko; Kanefa manana ihany ianao.
3:29 Aza mamorona sain-dratsy hoenti-mamely ny namanao, saingy mitoetra matoky eo aminao izy.
3:30 Aza miady amin’olona foana, raha tsy mbola nanisy ratsy anao izy.
Anisan’ny manampy be dia be hananana fahendrena avy amin’Andriamanitra ny famakiana ny bokin’ny Ohabolana .Boky manome toromarika hendry izy . Amin’ny fifandraisana amin’ny hafa dia ireto no tsy tokony hohadinoina .
1-Mizara fanomezam-pahasoavana (and27,28)
Misy nomen’Andriamanitra tombom-pahasoavana eto amin’izao tontolo izao . Mazava ny antony nanomezan’Andriamanitra izany , mba hozaraina amin’ny hafa izay ao anatin’ny fahasahiranana.Tsy azo fihinina ny tombom-pahasoavana avy amin’ny Tompo fa natao hozaraina izany ho enti-manasoa ny hafa , indrindra fa ireo sahirana. Raha misy amintsika nahazo tombony manokana avy amin’ny Tompo dia tena tombony lehibe ho antsika izany satria ho tànan’Andriamanitra miahy ireo madinika sy sahirana isika. Raha teto amin’izao tontolo izao i Jesoa , dia tena niezaka nizara ny fahasoavan’Andriamanitra tamin’izay rehetra nifanerasera taminy.Izy no anisan’ny nanao soa indrindra ny mpiara-belona taminy.
2-Tsy manao ratsy olona (and 29,30)
Anisan’ny asa soa araka izao fampianaran’ny bokin’ ny ohabolana izao ny tsy fanaovana ratsy olona . Ny kristiana dia tsy mahazo mamorona sain-dratsy akory ho enti-miady amin’ny hafa, indrindra raha tsy mbola nanao ratsy azy ny olona.Tsy mahazo mamorona saina ratsy na dia amin’ny olona tsy nanao ratsy aza ny kristiana . Araka izany dia asa soa tsy maintsy tanterahina ny fihazonana ny fihavanana amin’ny hafa mba ho tsara mandrakariva .Koa satria hazonina ho tsara ny fihavanana dia miezaha manasoa , fa tsy manao ratsy olona . Fomba tsotra indrindra ifanasoavana izany .
Asa soa toy ny ahoana no hanehoana ny maha-kristiana?